3 Ahịa, 3 Animated gifs, 3 Email Marketing Mmụta | Martech Zone
3 Ahịa, 3 Animated gifs, 3 Email Marketing Mmụta
Echiche nlegharị anya na-adọrọ adọrọ na email nwere ike ịja ozi ahịa kama ịdọpụ ya. Emma, onye mepụtara nke dị mfe, nkecha na smart email ahịa, chịkọtara ọdịnaya banyere otu esi eji GIF arụ ọrụ nke ọma na email ahịa, zuru oke na ihe atụ atọ nke ndị ahịa. Anyị na-adịbeghị anya na-akọrọ a jụụ ngwá ọrụ, Cinegif, iji nyere gị aka ime gifs animated.
GIF ndị na - emegharị ahụ na - achịkwa ịntanetị ugbu a n'ihi ike ha nwere ịdọrọ uche, nke bụ ihe ndị ahịa chọrọ maka ụdị ha. Iji GIF ndị dị egwu na ire ahịa email nwere ike ime ka ọdịnaya gị dị mfe ma rie ma sie ike karịa ihe onyonyo na-ada ada, ”Lee Floyd, Director of Brand kwuru. “Agbanyeghị, etinyela onwe gị n'echiche na-ezighi ezi na GIF ndị na-eme egwuregwu kwesịrị ịdị na-atọ ọchị, na-adịghị mma, ma ọ bụ karịa. Classy, ​​mfe, animated oyiyi nwere ike ime ebube na-ewusi gị ika mgbe enịm n'ime nri email. Emma
Mgbe onye mmebe Los Angeles Paul Marra kpaliri ebe ngosi ya gaa ebe ohuru, o jiri Emma weputara ndi ahia ya okwu a. GIF ahụ na-emegharị ahụ na-akọ akụkọ ahụ dum, site na nzọ ụkwụ na eserese ngosi na “Anyị akwagala!” ọkọlọtọ na ndepụta adreesị ọhụrụ. Ọ bụ obi, nkecha ma dịkwa mma.
2. Dọrọ uche gaa na ihe kachasị mkpa
Emma ahịa usoro mara maka ojiji nke ịhazi agba na ntinye ngwaahịa na ụdị ederede na oghere ọcha iji mepụta mmetụta ikuku na email ọ bụla. Na email a, ha ejirila GIF na-eme ihe nkiri iji dọta uche na nkwalite 20% ha. Ọ bụ aghụghọ na n'ụzọ zuru ezu na akara ha mma ma na-arụ ọrụ nke ịdọrọ uche gaa na nkwalite ha.
3. Gosi otutu Ngwaahịa
Ọ bụrụ n'ị bụ onye na-ere ahịa n'ịntanetị, gifs nwere ike ịgbanwe ụzọ ndị debanyere aha email si etinye aka na ngwaahịa gị. Tụlee ihe atụ a si Emma ahịa Nnụnụ Barbershop: Nke a ọ bụghị ihe onyonyo a na - emegharị ahụ ọnụọgụ ugboro nde karịa ọnụọgụ nke ngwaahịa ntutu?
Emma na-enye 5 Ndenye Ntuziaka maka iji GIFS eme ihe nkiri na Mgbasa Ozi Email:
Mee ka mmegharị gị dị mfe. Ọ bụrụ na ị nwere ike ikwu otu ihe na okpokolo agba anọ ị nwere ike na 4, họrọ maka usoro dị mkpumkpu.
Gbaa mbọ hụ na ị na-eme ihe omume na-emesi otu isi ihe ike nke mkpọsa gị. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị maka ngosi, ọ bụ, ọ dị mma, naanị maka ngosi.
Tụlee ijikọta GIF ndị animated na Flash. Ọ bụrụ n’inweta ihe ngosi Flash na-adọrọ adọrọ na webụsaịtị gị, tinye ụdị nke dị mfe dịka GIF na-akpali akpali. Gụnye GIF na email gị, mana jikọta ya na peeji Flash mara mma.
Gbalịa ule dị mfe. Ọ bụrụ n’inweghị obi abụọ ma animation ọ ga - enyere gị aka ikwu okwu, gbalịa izigara ọkara ndị na - ege gị ntị ihe nkiri, ma zipụ onyonyo oge niile na ọkara ọzọ.
Lelee gị nha faịlụ. Anyị na-akwado ịdebe ogo email gị niile n'okpuru 40K, yabụ ndị sava na igbe mbata na-ejikwa ya ngwa ngwa. Mee atụmatụ gị animated gif ya, ma họrọ maka agba dị mfe na eserese na okpokolo agba gị iji debe faịlụ gif dị na nlele.
Tags: animation gifEmma
Ọkt 11, 2013 na 8:44 AM
Akwa post Doug! Daalụ maka ịkekọrịta! M n'ezie nwere oké oge ..